Mitemo Yakapiwa vaIsraeri naMwari Panyaya yeUtsanana
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Belize Kriol Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Estonian Faroese Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malayalam Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Norwegian Pangasinan Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Romanian Russian Sango Serbian Serbian (Roman) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Telugu Thai Turkish Twi Vietnamese Yoruba
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Mitemo Yakapiwa vaIsraeri naMwari Panyaya yeUtsanana
Makore anenge 3 500 apfuura, vaIsraeri vasati vapinda Munyika Yakapikirwa, Mwari akati aizovachengetedza ‘pazvirwere zvese zvakaipa’ zvavakanga vaona muIjipiti. (Dheuteronomi 7:15) Akavapa mitemo yaizoita kuti zvirwere zvisapararira uye vave neutsanana. Semuenzaniso:
Vakanzi vaifanira kugeza miviri yavo uye kuwacha hembe dzavo.—Revhitiko 15:4-27.
Kana iri tsvina yevanhu, Mwari akati: “Panofanira kuva nenzvimbo yakasarudzwa kunze kwemusasa, kwamunofanira kuenda. Unofanira kugara uine chekucheresa pazvinhu zvako zvaunoshandisa. Unofanira kuchera gomba nacho paunozvibatsira, wofushira tsvina yako.”—Dheuteronomi 23:12, 13.
Vanhu vaifungidzirwa kuti vane chirwere chinotapukira vainzi vagare kwavo vega kwenguva yakati kuti. Vasati vadzoka, vaya vanenge vapora vaifanira kutanga vawacha hembe dzavo uye vogeza miviri yavo kuti vave ‘vakachena.’—Revhitiko 14:8, 9.
Munhu wese aibata chitunha ainzi agare kwake ega.—Revhitiko 5:2, 3; Numeri 19:16.
Mitemo iyi yakapiwa vaIsraeri yairatidza kuti vakanga vachitova kumberi panyaya dzeutsanana.
Vanhu vekune dzimwe nyika, vakanga vakasaririra kumashure panyaya dzeutsanana. Semuenzaniso:
Tsvina yairasirwa munzira. Mvura yakasviba, chikafu chine utachiona, uye marara zvaiita kuti pasava neutsanana. Zvaiita kuti vanhu varware uye vana vakawanda vaifa vachiri vacheche.
Vanachiremba vepanguva iyoyo vakanga vasina ruzivo rwakawanda nezveutachiona hunokonzera zvirwere. VaIjipiti vaishandisa mishonga yaigadzirwa nezvinhu zvakadai seropa remadzvinyu, matoto emadhadha, mbeva dzakafa, weti, uye chingwa chava nechakuvhuvhu. Tsvina yevanhu uye yemhuka yaishandiswawo pakurapa.
Mvura yaishandiswa nevaIjipiti yemurwizi rwaNire uye yemune dzimwe hova yaiva neutachiona. Saka vana vakawanda vaifa nechirwere chemanyoka nezvimwewo zvirwere zvinokonzerwa nekudya zvinhu zvine utachiona.
Asi vaIsraeri vakaramba vaine utano, nekuti vaitevedzera zvaiva muMutemo waMwari.
Bhaibheri Harinyepi Panyaya Dzesainzi Sainzi neBhaibheri